Samy mpianatra eo anivon’ny oniversiten’io tanàna io izy roa ary efa miara-mipetraka aza, tsy mifanalavitra ny place de la Gambetta. Hita faty tao ilay vehivavy izay nihoson-drà tanteraka satria feno tsatok’antsy efa ho roapolo isa. Nanao antso avo mba hanaovana tsipaipaika amin’ny famerenana ny nofony hody an-tanindrazana ireo naman'ilay tovovavy .
Raha ny fantatra sy heno dia tena nipaika tany amin’ny fitondràm-panjakana ny fahamafisan’ny firaisan-kina amin’ny fangatahana famoahana an’i Arphine Rahelisoa, mpanao gazety. Re fa efa mikofokofoka ny eo anivon’ny fitsaràna ao mijery akaiky ny dosie an’ity talen’ny famoahana ny gazety Valosoa ity. Ny mpitory koa, na niezaka niafina aza, dia nivoaka hoazy teo ihany ny tarehiny . Minisitra ny governemanta izay efa fanta-daza ihany amin’ity fahaizany managadra izay tsy mety aminy ity.
AMPIASAN'NY JIOLAHY NY TAMPIM-BAVA
Nisy nanisy « chloroforme » tao anaty tampim-bava. Raha vao torana ilay olona dia batain’ireo jiolahy fotsiny ny entana izay mety aminy ao an-trano. Izany no nitranga tetsy Anosivavaka. Mody ho nilaza fa mpizara tampim-bava aloha ireo, tao amin’ny trano izay efa nokendreny. Nitsirika teo amin’ny manodidina ihany ireo ary raha vao nitsirara ilay olona dia efa avy ireo olon-dratsy sady mpamosavy. Mila mailo hatrany amin’ny fisian’ny mpiasan’ny fahasalamana sy mpitandro ny filaminana sandoka.
FANAFODIN'NY COVID 19
Niala bala tanteraka ny fikambanam-ben’ny mpanondrana « huiles essentielles » eto amintsika. Nilaza izy ireo fa tsy mahafantatra ary tsy tompon’andraikitra amin’ny fanafody nentim-paharazana izay vokarin’ny filoha mba hiadivana amin’ny Covid19. Nolazain’izy ireo koa fa tsy misy hain’izy ireo ny momba izany na ny kely aza. Manomboka mihamafana ny tsindry rehefa marobe ny sehatra iraisam-pirenana nanontany momba io fanafody vokarin’ny firenena io. Asa izay hiafaran'ity resaka ity
Mitohy ihany izany ny fitazomana an'i Tence Mena ao amin’ny hopitaly etsy Anosiala. Ny antony dia mbola noporofoin’ny siansa ihany fa mitondra ny tsimokaretina Covid19 ny vehivavy. Ny andrana fahadimy no nahitàna izany ary dia mijanona herinandro vitsivitsy ao an-toerana indray aloha izany izy manaraka ny fitsaboana rehetra. Soa fa matanjaka ara-tsaina ny anao vavy ary dia nilaza fa tsy maintsy resiny io aretina maditra aminy io. Tsy misy soritra amin’ny vatany na ny fihetsiny kanefa dia mitondra ny Covid19 i Tence Mena.
Dia tena mifanohitra tanteraka amin’ny fepetra ara-pahasalamana izay entina hiadivana amin’ny Covid-19 ny famoriam-bahoaka etsy sy eroa momba ny fametrahana ny olona izay handrafitra ny komity Loharano, izay hapetraka eo anivon’ny fokontany ary eo ambany fiahian’ny filoham-pirenena. Nanerana ny nosy dia feno olona avokoa ny fivoariana ary hipoka ny efitrano. Asa, toa izay mihitsy ve no entin’ny tompon’andraikitra hanamarihana fa niasa mafy izy ireo ? Mbola werawera hatrany ve na efa anaty ady mangotraka aza ny firenena ?